Ammanka Caasumada Puntland oo la adkeynayo.
May 19, 2020 Mahad Jama 31
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Denni iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Denni uu ka dalbaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar Kaar ciidamo badan.
Ciidamadani oo madaxweynaha ay isku beel yihiin ayuu u qorsheeyey in uu dagaal kula galo sida la sheegay ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo isna ciidamo soo dhoobay duleedka Garowe.
Arintani ayaa sii xoojinaysa xiisada murugsan ee u dhaxaysa labada hogaamiye, waxaana mid walbaaba uu kusii adkaysanayaa go’aankiisa.
Qaar kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka Puntland iyo isimadda dhaqanka ayaa dhex dhexaadin guul daraystay ka dhex waday maalmihii ugu dambeeyey madaxweynaha Denni iyo ku xigeenkiisa Karaash, waxaana fashilka dadaaladaasi loo aanaynayaa in ay qayb ka yihiin labada hogaamiye oo mid walbaaba uu soo jeediyey kan kale arimo lidi ku ah.
Axmed Karaash ayaa hor dhigay xubnaha dadaalada dhex dhexaadinta waday in Denni uu wax ka badalo qorshihiisa magacaabista xubnaha xukuumadda maadaama uusan la tashi kala yeelan isaga arintaasina ay dhacday marar badan midna ugu taabto wareegtadii dhawaan kasoo baxday xafiiskiisa ee magacaabista taliyaha ciidamada madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa, taas oo uu Denni diiday.
Xubno ka tirsan madaxtooyada oo aan xidhiidh la samaynay ayaa noo xaqiijiyey in madaxweyne Denni uu awood ciidan iyo mid siyaasadeedba ku bixinayo sidii uu u wajihi lahaa Axmed Karaash, isagoona ciidamo dheeraad ah ka dalbaday magaalada Qardho si ay qayb uga noqdaan xiisada hadii ay sii xumaato.
Warar kale oo hoose ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Denni uu qorshaynayo in Baarlamaanka dhexdiisa xasaanada lagaga qaado Karaash isla markaasna madaxweyne ku xigeen looga dhigo Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan oo ay yihiin saaxiibo horena u soo noqday wasiir ku xigeenkii Maaliyadda Puntland kana mid ahaan musharaxiintii u loolamayey xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland doorashadii 2019.
Marka aad u si guud u eegto Puntland ayaa u muuqata mid sii xumaanaysa, waxaana hore ay isku qabteen madaxweyne Denni gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland C/xakiin Dhoobo Daareed, kaas oo awood ciidan iyo mid hantiyeed uu u isticmaalay ridistiisii daba yaaqadii sanadkii hore, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada Puntland ay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ku qaadeen xarunta Baarlamaanka oo ilaalo kooban ay ku sugnayd xiligaasi isla markaasna ku qabsadeen awood ciidan mooshina lagu riday gudoomiye Dhoobo.
Hadaba Axmed Karaash ma mari doonaa wadadii Dhoobo Daareed? Isaga iyo Denni keebaase ku adkaan doona Puntland?
Waxaa su’aalo ay is weydiinayaan shacabka, waxaana ififaalo u ah xiisadah sii xumaanaysa ee haatan taagan, taas oo u muuqata mid halisteeda leh sababi kartana in Puntland ay gasho xaalad adag.
HALKAN HOOSE KA AKHRISO QORSHAHA KARAASH & XOGGO KALE
DEG DEG:Axmed Karaash oo ciidamadii ugu badnaa soo dhoobay duleedka Garowe & Xiisada dagaal oo taagan
Pls wax khayr sheega wax walba sidii umada puntland khayr ugu jiro ayeey noqon rabi yasir walatacasar
Puntlandtimes Waxaan idin oran lahaa wax iskula hara. Dacaayadda Puntland joojiya. Haddii aad Madaxweyne Dani aad necebtihiin; Puntland Dani ma’aha, ee Dani ayaa reer Puntland ah ee joojiya warka xun ee aad dumcadda Puntland ku dilaysaan. Ogaada in taariikhdu idin xukumayso.
Kkk war tii budhlayn Ahayd waa u dhamataay wlhy. Waa maxay labadiii nin ee ugu Sareeyay Oo mid waliba gaarkiisaa u dalbaday ciidamo beeshiis ah ??
War budhlayn badbaadin ayay u bahantahay 🤣🤣🤣🤣
Deni qar buu ka tuuraya Puntland. Isimadii meeye.
Putland wey udhamaatey halkaasi filmkii putland kusoo gabagaboobay
Somaliland dhulkiina sidaasay Ku qaadatay alshabaabna boosaasey sidaa Ku qaadatey gaalkacyana galmudug baa qaadaneynasa waxaana ka dambeeyay burburka putland farmaajo iyo Somaliland oo iskaashanaya oo kale dano dhaqaale iyo istiraajiyad
Hadee buqlayn waa budh-budhay hadii eebee idmahayo.
Waxaan la yaabaa mid dabcasar iska dhigay xumaan ta iyo nacayb ka puntland waxaan filayaa Inaysan puntland wax ba u dhimayn,
“Soomalidu Waxay tiraahdaa sagaaradii badda ku kaadiday neceeday warisaye cid na wax mayeeleen”
Puntland waa qaan gaar shaqsiyaad u joojin Mayso.
Khilaafka halla soo afjaro xiligan Puntland uma baahna,mana qaadi kadho.
Waa hogaan xumo ayadoo la qarxinayo magaalooyinka waaweyn ee puntland amni darro jidho,xanuuno laga cabsi qabaa socdaan oo ka jiraan gudaha in lays qaqabsado,lana garan waayo masuuliyadii umada iyo ilaahayba laga qaaday,loona xafiltamo sidii dumar.
Waar umada ka xishooda,oo iska dhiiba talada hadaydaan wadi karayn hadaaba fashilkiina loo jeedaayee.
Haloo kaco xalka arinkan oo isimada,siyaasiyiinta,culimada,urururada bulshada,saxaafada ha ka qayb qaataan xalinta arrinkan.
Saxaafada Puntland oo lahayste u eeg Puntlandtimes maahanee tooshka ha Ku ifiyaaniin fool xumada socota sidaas ayay Ku badbaadin PUNTLAND.
puntland qorshe loo maleegayey muddo ayaa ku habsaday!,
shacabka,isimada, iyo dhammaan bulshada puntland waa inaynu isku tashanno,waxba yaan la sugin siyaasiyiin calooshood u shaqaystayaal ah!,
Guntii baa habaar lasoo fadhiisatay. Futocasar iyo Boondhere oo labada qabiil ee SOOMAALI inta ku hadasha ugu liita ayaa Puntland wax kasheegaya. Yaahu baanu idin dhahnay qumayahay. Ciddiyo aas iyo aleelo daadin horaa wax uyeeli waayeen Puntland ee asayda iska sida gunyahay.
Geele bro laangaab oo dhan waa la cadaabin wax kalena loo cadaabi maayo cuqdada iyo nacayb ka ku jira ayaa loo cadaabin war Puntland waa qaran dharci iyo dastuur leh hadii khilaaf jirana isagaa kala saaridoona maduuliyiinta. Ciidanka Puntland waa hal ciidan oo hal sumadleh taliyahooda guudna waa Madaxwayne Dani.
War kaagan magaca Boodheri ku qaraabanayoow, isku kalsoonow oo naceybka Buntland aad u qabto ee kaa burqanayo, magaca aad leedahay ku muujiso!!
Puntland waa dhul Daarood oo shar iyo sheeydaan iyo hagardaamo nacab ka Cijaaban.
Ninkii Talin jiray wuu talinayaa, kii illaa iyo Cali Yuusuf iyo Cabdulle loo talin jirayna waa loo talinayaa. Puntland iyo Daaroodna kor bay ahaanayaan.
Cunuga webka qora waa cadaw
War kan web kan qoraa waa qof sidee ah muu iidoor kan web Block ka saaro waba qof jiran walaahi
Meeye Khaniiskii Eeyduur e habargusjeclo o Suuliland Xaargeysa kasoo ooyi jiray
Puntland Page says:
Boodhari waa ogaa in Idoor isqarinayaa yahay Lkn waxan la yabaay dabcasar maxaa kasoo galay Puntiland? Walee waa yaabanahay cajiib. 24/7 MJ buu afka kuhayaa waxa duliga ah shit
Somalidu runtay diidaa
Imika wax putland LA yidhaahdo
Majiro waxaa jiri jirey gobolo LA odhan jirey #MAJERTENIA.
Siyaasiyiintaa inugu awrkacsanaya kuwan araanjaan
Boodhari naagta magacan KU qaraabanaysaay siilka Iyo ufta dado oo orod webkan puntland baa leh yaan lagugu dhex wasine web iidoor orod aad maxa adiga puntland kaagalay uf yahay uf ta dado ileen siil baa kaa jeexane puntland ma KU wasaan baad u soo doontay maad aadid web kiina mise waa soo habaowday
Puntland awalba waxay ahayd laba gobol bari iyo nuugaal inta kale dhabayaco ayaa ku dhibco badsata
Kuwa bakhbakhlaynaya ee mashxaradayow waad khasaarteen ee candhuuftiinna dib u liqa. Xitaa haddii ay isku dhacaan Deni iyo Karaash, taasi waxba u geysanmayso Puntland. Axmed-karaash kuma dagaallami karo Garowe, haddii uu ku dagaallamana guul ka keenimayo ee isaga oo cago cad ayuu sidii Dhoobo-daareed uga cararayaa. Mid kale oo ina adeerkiis ah oo shilimaadka u xisha uun baa lagu baddeli doonaa, illeen awalba dhul iyo dad Puntland raacsan maysan haysannine. Bal Buuhoodle ha u geeyo Muuse Biixi, ciddii ku khasaarta ha la arkee.
Waxa Karaash ka wado Garowe iyo dagaalka ka dhacay duleedka Gaaalkacyo waa isku xiran yihiin waxaana ka dambeeya doqonka Daarood ee Villa Somalia ku jira ee afgarooca ah ee dawada (diana) naaguhu isku caddeeyaan ka hambeeysta islaantiisa.
Puntland gobol walba gaarkiis ayuu isugu filan yahay oo isu daafici karaa, weligiina isu daafici jirey. Reer Gaalkacyona huur iskama saaraan, cabsina kama qabaan huwanta argagixisada iyo inta Farmaajo iyo Fahad Yaasiin soo siiyeen dollarka Qatar.
Marka, jaajaaleyaasha iyo suxulbaruurta mashxaradayow, ismarjiya and get a life.
Puntland waxay leedahay shacrci iyo dastuur kala saaraya hadii khilaaf ka yimaado madaxda sare isagaana lagu kala bixin InshAllah mana dhacayso sida kuwa halkan wax ku qora oo aan ognahay inay kooxda Farmaajo ee villa wardhiigley u shaqeeyaan. Madaxwaynaha Puntland wuxuu leeyahay awood uu dastuur ka Puntland siiyay sidoo kale Madaxwayne kuxigeenkuna wuxuu leeyahay awood shaqo u gaar ah dastuur ka Puntland ayaana qeexaya isagaana kala saaridoona maduuliyiinta hadii kala aragti duwani ama khilaaf jiro simple is that. Waxaan u sheegayaa Farax faaruqa halkan sidii naag madayrtay daqiiqad walba hadal caruureed csntarabaqash ah soo gelinaya adeer Puntland haw gafin kamana jiraan qab qablayaal midba ciidan gaar u haysto Puntland waa qaran 25 sano jiray waxay leedahay qawaaniin iyo sharuuc u degsan oo la raaco waxay leedahay hal ciidan oo hal sumad leh taliyahooduna yahay mudane xurmadle Madaxwayne Saciid Dani ama Qardho ha joogeen ama tukeraq ha joogeen waxaa marka siiya taliyaha ugu sareeya Puntland oo ah Madaxwaynaha Saciid Cabdullahi Dani, waan soo dhowaynaynaa in sharciga lagu kala baxo waana democracy iyo dowladnimo in sharcigu yahay marjaca loo laabto hadii wax qsldamaan waayo waa sababta loo sameeyay dastuur ka Puntland in la baal maro oo xaal xaala mastuur laga doorbidaa xal keenimayso waana waxa somali ragaadiyay inta sharciga meel layska dhigo wax kale oo aan sharci ahayn lagu lug gooyo umada. Hadaanu nahay shacabka Puntland waxaan aaminsanahay inaan qof a sharciga ka waynayn masuuliyiintu haday is qabteen waxaa layiri carab iyo ilko ayaa isugu dhow ayana ways qaniinaan waayo shaqada ka dhaxayso weye kala aragti duwanaanshuhu sidaa daraadeed sharciga haku kala baxeen.
Dhibaatadii ay soomaalida Ku Hayeen ayaa kasoo ifbaxday reerku xumaan badanaa oo xin badanaa hada laga bilaabo gaalkacyo oodhan waxaa laga xukumi doonaa galmudug gobolka bari wuxuu hoos tagi doonaa dawlada dhexe .garoowe kaliya isku dhex cayrcayrsada
A.ARAR:markay xaaladu idinku xumaataba farmaajo isku xoqa waa dhaqan dumareedka laydinku yaqaan ileen rag mahor istaagi kartaane
Puntland waa iney distoorkeeda wax ka bedeshaa. Waa in si faahfaahsan loogu kala cadeeyaa masuuliyada Madaxweynaha iyo ta ka Kuxigeenkiisa.
Waa in Madaxweyne ku xigeenka loo asteeyaa inuu waajobaadkiisu yihiin in;
b. Uu noqdo sii hayaha Hogaanka dalka marka uu Madaxweynuhu safar dalka kaga maqan yahay ama uu xanuunsanayo.
t. In uu qabto xaajao kasta oo uu Madaxweynuhu u igmado.
j. In uu xilka la wareego oo uu Madaxweyne noqdo hadii;
1. Madaxweynuhu dhinto.
2. Hadii Madaxweynaha xilka laga xayuubiyo ama uu is casilo.
3. Hadii Madaxweynuhu xilgab noqdo xanuun uusan kasoo kaban Karin awgiis.
Inta kale een raacsanayaa waa in inta ah Xisbiyo iyo Doorasho ka gaadhayaan aanan lakala dooran Madaxweynaha iyo ku xigeenada. Waa in jumlad iyagoo ah la foortaa. In qofka Madaxweynenimada u cararayaa uu soo xusho ku xigeenkiisa. Iyagu kusoo jeshiiyaan hadey wada tashanayaan ama xadiga uu ku xigeenku ku yeelan karo saameynta xukunka Madaxweynihiisa.
Intaas wixii ka badan ee la siiyaa ku xigeeni waa khalad.
Waayo isqabqabsi iyo khilaaf ayuunbaa ka abuurmi kara.
Dhanka kale Farmaajo iyo kooxdiisu waa xariifiin. Imika waxey ku takhasuseen sida fitnada loo abuuro.
Waxaad ka dheregsan tihiin waxa ay ku sameeyeen maamulada Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed iyo GalMudug. Waxey ku hayaan Jubaland iyo Puntlandna waad la socotaan ayaan u maleynayaa. Xitaa Somaliland shodada faraha badan ee ay ku hayaan cidina kama qarsoona.
Hir Shabeele, Koonfur Galbeed Sanka ayay dalooliyeen sidii dibidii oo kooraha ayay u hayaan oo sidey doonaan ayay u hogaamin karaan. Waayo malahan iyagu dhaqaale ka baxsan Villa Somalia ama cudud kaloo ay iskaga caabin karaan.
GalMudug waxey kasoo galeen kala qeybsanaantooda iyo tamar daridooda iyo dhaqaale yaraan toodana. Xaaf marmarsiinyo waxey uga dhigteen wakhtigii baa 2 Sano kaaga dhamaadey. Kkkk Xagee lagu arkey Hogaamiye labo sanadood uun la doorto. Kolkuu diiday sidey iyaguba hubeenba Ehlu Suna iyo Ku xigeenkiisii iyo Gudoomiyii Baarlamaanka ayay ka horkeeneen. Dagaal, shido, buuq, lacag, khiyaano iyo aakhirkii oo ay ciidan isticmaaleen ayay kaga guuleysteen.
Jubaland, lacag, khiyaano, ragbay soo dirsadeen, ciidan shisheeye iyo Beesha caalamka ayay isku dayeen iney adeegsadaan. Ku daraoo dhaqaalihiina wey ka jarteen. Duulimaadyadii wey ka xidheen. Imikana ciidan iyo xoog ayay dul geeyeen. Weliba waxba kama qaadin waayo Jupalald waxey heysataa dhaqaale yar iyo cudud yar ay wax iskaga caabin karto. Kamana baqeyso iney dagaalamaan. N&N weli kamey quusan iney ridaan Axmed Madoobe.
Puntland distoorkeeda ayay galdaloolooyin ka bidhaamisteen. Waana sababta ay Ku Xigeenada ugu salidayaan Madaxweynaha. Hadii xitaa uu Deni Karaash la tashado, Karaash laga yaabee inuu is hortaago go’aan kasta oo uu Deni gaadh is yidhaa isagoo inuu khilaaf dhaco uun ka fikiraya iyo siduu u wiiqi lahaan siyaasada Deni uu ka leeyahay Puntland. Waa hadii Karaash ay cugato Dawlada Farmaajo’e. Ku danbaabi maayo oo ma hubo. Laakiinse hadii khilaafku soo noqnoqdo oo Deni daacad ka yahay arinta oo uu la Tashi la sameeyo Karaash. Karaash’se ka horyimaad hindise ama go’aan kasta oo Deni gaadh isyidhaa dee arintu kolkaas waa Labo xaajood uun. Ama Karaash ayaa damaaci ah oo rabo inuu la xukumo meesha Deni ama dee waa lasoo cugtay oo wuxuu la shaqeynayaa Farmaajo iyo colkiisa. Ka imow taas. N&N waxey dhaqaale u dhiibtey gudi Boosaaso ka jira oo wado dhisayay. Maxey ula hareer martey Dawlada Puntland ee Deni gadh hayeenka ka yahay? Miyaaney taasi aheyn ulajeed kas ah? Hadaaney aaminsaneyn in Dawlada Deni tahay mid lacag lagu aamini karo mey Odeyaasha iyo gudidaba ku tidhaahdo, ‘naga raali ahaada, Dawladana hareer kari meyno, idina lacag idiin dhiibi kari meyno intey xaajo murugsan tahaye’. Waxey taasi aheyd shacab kicin iyo hurin siyaasadeysan. Dawlada Farmaajo ee N&N waa findhicil. Waxey fidhaa uun oo qodqodaa ama juqa juqeysaa kolba meeshii galdalool leh oo ay kasoo geli karto. Puntland dhaqaale iyo cudud intey doontaba ha le’ekaate’e leh awood ay wax iskaga caabin karto wey leedahay. Waxey kaloo leedahay hogaan iyo shacab soo jeeda oo wax raba. Taas oo ah Federaalnimo sax iyo khaladba. Sababtaas la ajligeed ayay aad ugu adagtahay in ay Puntland si dhib yar u hanato. Laakiinse buuq iyo iska horkeen iyo isku jabin ayay dhexdooda ka damacsan tahay inuu ka yimaado. Taasi shaki kuma Jiro.
Somaliland iyada waxey kala dagaalamayaan baraha bulshada ee onlineta ah. Caruuro ay Muqdisho uga gacan haatiyaan, Odeyaal ay hadla yidhaahdaan iyo warqado ay Beesha Caalamka u diraan. Laakiinse taas Somaliland wey ka foojigan tahay oo Beesha Caalamka cilaaqaad gaar ah ayay la leedahay. Warqadahoodana warqado kale ayay ka horgeysaa, cidii gudahayaga joogta ee bujuubajaa la timaadana waa la edbiyaa, kan baraha bulshada ka cabaadayana cidlo ayuunbuu ka dhurmaa oo isaga/iyada ayaa iska xiiqda. Si kastooy tahay oo ay u ogyihiin inaaney dad soo jeeda waxba ka qaadi karin hadana wey isku dayayaan intey doonaan.
Hadaba su’aasha ugu weyn ee ka inaneysa Dawlada Farmaajo waa; hamigeedu ma waxa uu ahaa oo Keli wax kharbud mise wax qabo oo dhis. Weli Alshabaab ayaa Muqdisho ku sugan oo cashuurtey qaadato in le’eg ka qaata Dadka. Maxkamado ka garab sameystey oo weliba xukunkoodu ka cadaalad badan yahay kooda musuqmaasuq halakeeyay. Nus sanad ayaa u hadhey gebigoodaba, waxeyna ka huleelayaan meesha iyagoo uga darey halkey ka qaadeen xukunka. Jiqbaa la’isku wada yahay.
Soomaaliya Alle uunbaa u maqan walee.
Beri, mar hore ayaan idhi danta Somaliland waxay ku jidhaa Puntaland oo nabad ah… waa la ila yaaabay… maanta puntland kama jrto nidaaam Dawli ah.. waaa fawdo waa qabiilo daarood ah xabad muuufo ah isku haysta.
Waa dhab oo danta Dal walbaa waxey ku jirtaa jaarkeeda oo wanaagsan. Inagu hadeynu Somaliland nahay si kasta ooynu iskaga soo horjeedno Puntland hadana nadadeeda, degenaan shiyaheeda iyo badhaadheheeda ayay dani inoogu jirtaa. Waayo cilaaqaad badan ayaa inaga dhexeeya. Ganacsi, isu socod Shicib, dhul daaqsimeed. Xoolaleydoodu dhulkeena xoolahooda usoo daaq geystaan hadey abaar ba’ani dhankooda ka dhacdo, kuwayaguna sidoo kale. Maanta Gaadhiga dhankooda laga soo dhaco ama qofka iyaga danbi kasoo galaa inaga inaguma dhex dhuuman karo. Iyagana kuwa faldanbi dhankayaga ka geystaa kuma dhex dhuuman karaan. Kolkaas nabadeenu waa nabadooda, tooduna waa taayada. 100% taas waan kugu raacsanahay.
Red puntland midbimo iyo somalinimo aan kala rabin ayeyku dawakheen wakaas shaxka dheefa villasomalia o dansan ayan furteen o dhaqalihini iyo dhiginiba kubixiseen Manta mesha larabo inlaga dumiyo wa villa somalia bahasha sida somaliland iska baandheya gooni isu taag kudhawaqa somalinimo idinka bes ayaa raba wayo xitaa shahadoyinki wey idin diiden wana meshii ugu tageerada badneyd sodhaweynta farmaajo iyo kheyre marka xududkina xidha xirirkana ujara nab
Puntland, masiibada ey ku socoto halaga dhowro. Gudoomiyaal la qarxiyo iyo madaxweyneyaal isheystiyo ehel dagaalamiyo. Stop Stop. Viva Puntland
Ninka qora joornaalkaan ma ahan nin reer puntland ah ee taas la socda magaca ayuu qaatay waa nin jiran oo cuqdadi dishay hormarka iyo wanaaga puntland ka xun.
Ilaahay baa Ku daaweyn kara ee isaga caafimaad weydiiso
Waxaan ku farax sanahy in ay Wali jiraan puntlander sax ah, Waxaa jira 2 cadaw A-cadaw gudaha ah iyo B-cadaw dibadda ka jooga puntland,Waxaase nasiib daro ah in cadawga gudaha ay ka mid yihiin dad dawladda puntland u shaqeeya maah maah ayaa ahayd “ciirtaa dhamaa caydaa yaqaan” waxaan ula jeedaa kuwa ka shaqaysanaya puntland ee aan aamin samayn jiritaan ka puntland, waxaan ogahay cadaw kale Oo isaguna jooga meela kamid ah soomaaliya iyo Kuwa dibadda joogaba
Hadaba Iyada oo aan lacay tamin wax hala iska celiyo dagaal adag ayay ubaahantahy dawladda puntland madaxdeedu dad ka yay ku xulan team Ee ha ku xulato waxa uu aamin sanyahy.